Chelsea Ayaa Stoke City Oo Gurigeeda Joogta Ugu Awood Sheegtay Kuna Soo Laabatay Hogaanka Horyaalka | Baarcadeeye
Chelsea Ayaa Stoke City Oo Gurigeeda Joogta Ugu Awood Sheegtay Kuna Soo Laabatay Hogaanka Horyaalka
December 22, 2014 - Written by admin
Sports (Baarcadeeye)-Kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah kooxda Stoke City gurigeeda kaga soo gaadhay, waxayna Blues guushan ku soo gaadhay 2:0, waxayna goolasha ay guushan ku soo gaadhay uga mahad celinaysaa kabtankeeda John Terry iyo Cesc Fabregas.Chelsea ayaana guuldaradii xili ciyaareedkii hore iska soo maydhay. Chelsea ayaana hadda dib ugu soo laabatay ku kali ahaanshaheedii horyaalka.
Chelsea ayaa marti u ahayd kooxda Stoke City, waxayna kooxda Blues doonaysay inay ka soo aarsato kooxda Stoke oo xili ciyaareedkii hore guuldaro xanuun badan dhabarka u soo saartay.
Chelsea ayaa sidoo kale doonaysay inay dib ugu soo laabato ku kali ahaanshihii hogaanka horyaalka kadib markii ay kooxda City hogaanka la sii wadaagtay guushii Crystal Palace kadib.
Chelsea ayaa sii ogayd in waxaan guul ahayn oo ay Stoke City kala soo kulantaa inay fursad dahabi ah siindoonto kooxda culayska ku haysa ee Man City.
Chelsea ayaana ciyaarta kub ilaabatay dardar fiican iyada oo isla daqiiqadii 2 aad ee ciyaartaba uu goolk furitaanka u dhaliyay kabtan keeda John Terry. Ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Chelsea xili horeba ciyaarta hogaanka ugu qabatay.Markale ayuu Fabregas magiciisa ku qoray caawinta goolka Chelsea, wuxuuna xili ciyaareedkan caawiye ka noqday goolkiisii 12 aad, wuxuuna hal caawin ka hooseeyaa Gerrard oo xili ciyaaredkii hore 13 gool caawiye ka ahaa. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 1:0 ay Chelsea ciyaarta ku hogaaminaysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay halkii Chelsea ka sii waday qaab ciyaareedkii fiicnaa ee ay soo bandhigtay qaybtii hore ee ciyaarta, waxayna bilawgii qaybtii danbe ee ciyaarta abuurtay fursado ay markiiba goolal kale ku dhashan kari lahayd, laakiin goolhaye Begovic ayaa fursadahaas ka beeniyay.
Kadib markii ay qaab ciyaareed liita soo bandhigtay kooxda martida loo ahaa ee Stoke City ayuu tababare Mark Hughes ciyaarta soo galiyay Charlie Adam iyo Mame Biram Diouf kuwaas oo ciyaarta wax ka badlay. Adam ayaana daqiiqadii 71 aad kooxdiisa u dhalin gaadhay goolka barbaraha kadib markii uu meel goolka Chelsea 30 yards u jirta kubbad xoog ah kaga soo darbeeyay laakiin kubbada ayaa wax yar birta u martay.
Kadib markii ay Stoke culayska saartay Chelsea ayuu Cesc Fabregas culayskaa ka dulqaaday kadib markii uu daqiiqadii 78 aad kooxdiisa Chelsea u dhaliyay goolka kalsoonida ee labaad. Fabregas ayaana kubbad uu ka helay Hazard kooxdiisa ugu saxiixay goolka ay aadka ugu baahnayd ee labaad, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Chelsea hogaanka ku dheeraysaytay.
Diego Costa ayaa daqiiqadii 84 aad iska qasaariyay fursad dahabi ah oo uu gool dhalintiisa sare ugu qaadi lahaa waxaana kubbad hal ka hal ah ka badbaadiyay goolahaye Begovic. Ugu danabayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaaatay 2:0 ay Chelsea ku soo gaadhay guul aad muhiim ugu ah, waxayna hadda dib ugu soo laabatay saddexdii dhibcood ee ay ka saraysay kooxda City oo si ku meel gaadh ah hogaanka ula wadaagaysay.